Nangataka tamin'i Apple ny FBI hamaha iDevice | Avy amin'ny mac aho
Ny FBI dia mangataka amin'i Apple hanokatra iDevice
Indray mandeha indray, ny olana mifandraika amin'ny fiarovana nomen'i Apple ny fitaovany dia tonga amin'ny haino aman-jery indray mandeha rehefa nampandeha ny sehatry ny fiarovana tamin'ny alàlan'ny rahona iCloud hatramin'ny iOS 7 izy. Amin'izany fomba izany, izay fitaovana mihidy amin'ny iCloud dia tsy ho afaka hamaha raha tsy ny mpampiasa no manao azy.
Apple dia iray amin'ireo orinasa maro miady amin'ny firenena sasany ka ny volavolan-dalàna tsirairay izay tadiavin'izy ireo dia manery ny an'ny Cupertino hamela varavarana ambadiky ny rafitr'izy ireo mba tsy handrosoan'ny polisy. Mandritra izany fotoana izany dia mitranga ny tranga ary ny FBI mihitsy no nangataka Apple hanokatra terminal izay novalian'i Tim Cook tamin'ny taratasy.
Mazava fa tsy miala amin'ny ampondra i Apple raha ny zavatra inoan'izy ireo dia ny tsiambaratelo tokony hananan'ny mpampiasa amin'ny findainy ary tsy misy toe-javatra mety hanarahan'izy ireo ny faktiora tadiavin'izy ireo fa orinasa maro no mamela varavarana ambadiky ny rafitra misy azy ireo mba hahafahan'ny mpitandro ny filaminana miditra ao anatiny ao anatin'ny baikon'ny fitsarana.
I Tim Cook tenany no tsy maintsy namaly ny FBI tamin'ny alàlan'ny taratasy iray rehefa avy nangataka taminy izy ireo hanohy hamaha, amin'ity tranga ity, iPhone iray. Ity fitoriana ataon'ny FBI ity Miorina amin'ny fitifirana nitranga tao San Bernardino nitranga tamin'ny volana Desambra ary nifarana tamin'ny fahafatesan'ny olona 14 izany.
Tian'ny FBI i Apple hanampy azy ireo hiditra ao amin'ny iPhone an'ny iray amin'ireo mpampihorohoro izay takian'izy ireo ny hanafoanan'izy ireo ny sakana izay miseho rehefa miditra teny miafina diso. satria amin'ny fanandramana azy tsy tapaka dia hamafana ny rafitra na dia ny atin'ny telefaona aza. Alohan'izany rehetra izany dia mamaly amin'ny taratasy i Apple, izay hasehonay anao feno eto. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina nilaza hoe:
Tsy mino i Tim Cook fa amin'ny fotoana iainantsika, dia misy zavatra mitovy amin'izany ary mbola tsy nisy orinasa amerikana nitory ny FBI mihitsy hatrizay. izay maniry ny rafitr'ireo fitaovana an-tapitrisany ho mora tohina "totohondry" nefa, etsy ankilany, nangataka tamin'ny olona tao Cupertino izy ireo mba hametraka ny rafitra misy azy ireo araka izay azo atao mba hisorohana ny halatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny FBI dia mangataka amin'i Apple hanokatra iDevice
Salama tsara aho amin'ny i Apple miaro fampahalalana sasany, fa izany angaha avy amin'ireo mpampihorohoro?
Alberto Lozano placeholder image dia hoy izy:
Raha fintinina, izay tadiavin'ny FBI, ary nolavin'i Apple, dia ny hamoronana rindrambaiko apetraka amin'ny alàlan'ny DFU i Apple ary mamela ny FBI handingana ny hidin-trano iCloud sy ny terminal mihitsy mba tsy hianjera ny iPhone aorian'ny fanandramana tenimiafina maro tsy nahomby . Ho fanampin'izany, ity fitaovana ity dia tsy maintsy mamela fidirana lavitra mba hahafahan'ny teknisianina FBI mianatra ny terminal.
Mazava ho azy, raha toa ka manome ity fitaovana ity amin'ny FBI i Apple, dia tsy misy antoka azo antoka fa tsy hofongorin'ny maso ivoho hampiasa azy io amin'ny iPhone hafa na dia lazain'ny mpitsara aza fa io iPhone io dia tokony hiasa ao amin'io iPhone io ihany. Ary mampatahotra ny fanaraha-maso lavitra ...
PDF momba ny didy eto:
Valiny tamin'i Alberto Lozano
Ahoana ny fomba hitahiry drafitra mailaka ao amin'ny mailaka fampiharana
Ny lalao 5 mampiala voly indrindra ho an'ny iPhone